डा. भोलानाथ चालिसे | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय डा. भोलानाथ चालिसे
डा. भोलानाथ चालिसे ६० वर्षअगाडि काठमाडौंको बौद्धस्थित सुवी गाँउमा जन्मेका हुन् । उनले भियना युनिभसिटी अष्ट्रियाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । २३ वर्षसरकारी सेवामा बिताएका चालिसेले २० वर्षउद्योग मन्त्रालयमा उप-सचिव, सह-सचिव हुँदै सचिवसम्म भएर काम गरिसकेका छन् । उनले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा २ वर्षर राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएर १ वर्षकाम गरेका छन् । चालिसेले योजना आयोगको सदस्य भएपछि २०५५ सालमा सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएका हुन् । सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएपछि पनि उनले एक वर्ष विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र करीब ३ वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएर सेवा गरेका छन् ।
सङ्घीय गणतन्त्र र आर्थिक उदारवाद
जब कुनै पनि देशमा प्रजातन्त्र हुँदैन र अधिनायकवादीहरुले शासन गरिरहेका हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा प्रजातन्त्रका बारे बरोबर छलफल एवम् बहस चलाइरहनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । यसो नगरेमा अधिनायकवादीहरु आफैले आफ्नो अधिनायकवादी व्यवस्थालाई नै सक्कली प्रजातन्त्र भनेर घोषणा गरिरहन्छन् । विभिन्नखाले अधिनायकवादीहरुले प्रजातन्त्रलाई विभिन्न नाम दिँदै अधिनायकवादी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन् । नेपालमै राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई हावापानी, माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र भनेर व्याख्या गरे । यो व्यवस्थाले देशमा ३० वर्षसम्म राजाको अधिनायकवाद अविच्छिन्न रुपमा सञ्चालन भइरहृयो । नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापश्चात् २०६३/६४ मा लोकतन्त्र आएको छ । सङ्घीयतामा आधारित लोकतन्त्रलाई संस्थापकीकरण गराउनका लागि नयाँ संविधान लेख्ने कार्य अझै बाँकी छ ।
व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूवक बाँच्न मात्र पाउने होइन स्वतन्त्रतापूवक आफ्ना निर्णयरु आफैले कार्यान्वयन गराउनका लागि स्वतन्त्र वातावरण उपलब्ध गराउनसमेत अहिलेसम्म उपलब्ध रहेका राजनीतिक व्यवस्थामा प्रजातन्त्र सबैभन्दा उत्तम ठहरिएको छ । प्रजातन्त्रमा पनि सङ्घीय शासन प्रणाली त अझ उपल्लोस्तरको राजनीतिक व्यवस्था मानिन्छ । एकातर्फ सङ्घीयतामा सरकार जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फकेन्द्रमा केन्द्रित शासन गर्ने शक्तिहरु विभिन्न तहको सरकारहरुमा विकेन्द्रित गरिएको हुन्छ । एकै ठाउँमा रहेको शासन गर्ने शक्तिले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई बरोबर हस्तक्षेप गरिरहने भएको हुँदा यस्तो शक्तिकेन्द्रलाई विकेन्द्रीकरण गर्न सङ्घीयतालाई प्रजातन्त्रको अझ उन्नत व्यवस्था ठानिन्छ । नेपाली जनताले सङ्घीय गणतन्त्रको समर्थन यसैका कारण गरेका हुन् ।
नेपालीले संविधानसभाको चुनावमा कस्तो सरकार बनाउने भन्नका लागि भाग लिएका होइनन् । उनीहरुले त लोकतन्त्रमा आधारित सङ्घीय संविधान निर्माणका लागि चुनावमा भाग लिएका हुन् । लोकतान्त्रिक सङ्घीयतामा व्यक्तिले के गर्ने, के खाने, के लाउने वा कस्तो व्यवसाय रोज्ने भनेर सरकारले पटक्कै हस्तक्षेप गर्दैन । केन्द्रीय शासन र केन्द्रीय योजनाद्वारा राजनीतिक प्रणालीहरु सञ्चालन गर्दा तृणमूल तहमा प्रजातन्त्र संस्थापीकरण नहुने भएकाले देशलाई सङ्घीय प्रणालीमा बदल्नुपरेको हो । सरसर्ती हेर्दा सरकारले केही पनि गर्नुनपर्ने भूमिकाका साथ संविधान लेखिनुपर्नेमा संविधानजस्तो मूल कानूनमै व्यक्तिले रोज्ने व्यवसाय कस्तो हुने, त्यस्तो व्यवसाय कुन प्रकारले सञ्चालन गर्ने र सरकारले केकस्ता निर्देशन दिनुपर्ने भन्ने विषयमा बहस हुनु नेपालको दुर्भाग्य हो । लोकतान्त्रिक सङ्घीयतामा जाने भनिसकेपछि यस्तो बहस गर्नुभनेको केन्द्रीकृत शासनप्रणालीमा घुमाउरो पाराले र्फकने चेष्टा मात्र हो ।
कुन व्यवसाय, कुन प्रकारबाट सञ्चालन गर्दा व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ त्यो निर्णय गर्न पाउने सार्वभौम अधिकार व्यक्तिको हो । कसैले निजी फर्ममार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्दा फाइदा हुन्छ भने त्यसैअनुरुप गर्छ, होइन सहकारीको रुपमा सञ्चालन गर्छ भने त्यसै प्रणालीलाई रोज्दछ । प्रजातन्त्रमा सरकारले कुनै प्रकारको प्रणालीअनुरुप नै व्यक्ति हिँड्नुपर्छ भनेर भन्नु, फेरि दोहोर्‍याएर भन्नुपर्छ, व्यक्तिको निर्णयगर्ने स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हो र यस्तो हस्तक्षेप सङ्घीय लोकतन्त्रमा सम्भाव्य नै हुँदैन । यस्ता हस्तक्षेपसहितको संविधान लोकतान्त्रिक हुनै सक्तैन ।
धनी देशमा समेत गरीबलाई गरीबीबाट उकास्नका लागि सरकारले सबैथोक गर्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा बलियो रुपमा रहेको छ । निजीक्षेत्र नाफामुखी हो, यसले मौका पाए मान्छेको रगतै चुस्छ र यसले आफूबाहेक अरुलाई वास्तै गर्दैन भन्ने मिथ्या धारणाका आधारमा यस्तो हुने गरेको छ । व्यक्ति आफैमा पशु होइन र व्यक्तिले अर्को मानिसको रगत चुसेको अहिलेसम्म मानव इतिहासमा थाहा पाइएको छैन । व्यक्तिलाई डर, त्रास र धम्की विना निर्णयगर्न छोडिदिने हो भने उसले त्यस्तो निर्णयगर्दा आफूलगायत आफूवरिपरिका सबैलाई सन्तुष्ट तुल्याउने प्रयास गर्छ । व्यक्तिका अतिउत्तम गुणहरुमध्येको यो एउटा हो । यसका लागि व्यक्तिले स्वतन्त्र बजारमा स्वतन्त्रतापूवक वस्तु वा सेवाको खरीदविक्रीमा सहभागिता जनाउन पाउनुपर्दछ । हो, व्यक्तिले निर्णयगर्दा आफूलाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुने गरी निर्णयगर्दछ तर स्वतन्त्र बजारमा एक व्यक्तिले यस्तो निर्णयगर्दा अर्को व्यक्तिलाई स्वतः फाइदा पुगिरहेको हुन्छ । आफ्नो बारीमा फलेको फर्सी बेच्ने किसानले पाएको पैसा तिरेर पसलबाट तेल किनील्याउँदा फर्सी बेच्ने र तेल किन्ने दुवैथरीको व्यक्तिगत सन्तुष्टि दुवैको आआफ्नो मूल्याङ्कनमा उच्चतम भइरहेको हुन्छ । यसमा फर्सीसँग तेल साट्नु हुँदैनथ्यो भनेर भन्ने सरकारको के अधिकार ? अथवा फर्सी र तेलको व्यापार बजारमा व्यक्तिव्यक्तिको मोलतोलाइबाट निर्णयनभई सरकारले मूल्य किन तोकिदिनुपर्‍यो ? व्यक्तिले फर्सी कहाँ बेच्ने अथवा तेल कहाँ बेच्ने भन्ने कुरामा सरकारले सहकारीमै लगी बेच किन भन्नुपर्‍यो ? सरकारले व्यक्तिको सम्बन्धमा निर्णयगर्न खोज्ने हो भने पहिला त उसले व्यक्तिको इच्छा र आकाङ्क्षा बुझ्नै सक्दैन । दोस्रो, व्यक्तिले आफू सन्तुष्ट हुनका लागि आफैले गर्ने निर्णयरु जति उत्तम हुन्छन् त्यति उत्तम निर्णयसरकारले गर्नै सक्तैन । सरकारले गर्न खोजने हो भने उत्तम रुपमा निर्णयगर्नका लागि केन्द्रीय योजनाको आवश्यकता पर्दछ र यस्तो योजना सञ्चालनका लागि केन्द्रीय शासन र ठूलो आकारको कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता पर्दछ । केन्द्रीय योजनाले व्यक्तिलाई उन्नतितर्फ होइन दासतातर्फ लैजान्छ ।
नेपालमा सङ्घीय लोकतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा सरकार त के कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने मात्र होइन उसका लागि अरु कसैले निर्णयगर्न पाउँदैन । राजनीतिक रुपमा एकातर्फसङ्घीय लोकतन्त्र भन्ने तर आर्थिक हिसाबले व्यक्तिले गर्ने क्रियाकलापहरुमा तीनखम्बे, चारखम्बे, पाँचखम्बे नीति भन्दै केन्द्रीय योजना र केन्द्रीय शासन लागू गर्न खोज्ने प्रयास कदापि नैतिक ठहरिँदैन । नैतिकतामा आधारित शासन मात्र प्रजातान्त्रिक हुन सक्तछ र यस्तो नैतिकता जनताको समर्थनबाट मात्र प्राप्त हुन सक्दछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान लेख्नका लागि पठाइएका राजनीतिक प्रतिनिधिहरुले व्यक्तिको स्वतन्त्ररुपले निर्णयर व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नुभनेको अनैतिक कार्य हो ।